သူမက ပုဒ်မ (၅၀၅) ထဲမပါတာနဲ့ ဒလံမလို့စွပ်စွဲနေကြတဲ့အပေါ် ထိမိစွာပြောလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်….. – Cele Snap
သူမက ပုဒ်မ (၅၀၅) ထဲမပါတာနဲ့ ဒလံမလို့စွပ်စွဲနေကြတဲ့အပေါ် ထိမိစွာပြောလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…..
April 23, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်များစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာနဲ့သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ယနေ့အချိန်ထိ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတာပဲဖြစ် ပါတယ်နော်..။နှိုင်းယှဉ်က သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရုံတင်မကပဲ Online Sale ရောင်းတဲ့နေရာမှာလည်း အောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်က ခင်ပွန်းကောင်းပီသပီး သူမအပေါ်အရမ်းကိုချစ်ခင်ကြင်နာတဲ့ခင်ပွန်းသည် ကိုဘင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ချစ်စရာသားလေးတစ်ယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။လတ်တလောမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သူမဟာ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုနိ်ုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှာအမြဲပါဝင်နေတဲ့သူမကို ဒလံမလို့ပြောတဲ့အပေါ် အခုလိုပဲတုန့်ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်က” ဪ… ၅၀၅ ထဲမပါလို့ ဒလံမ လို့ ပြောချင်တာလားမသိ Feb 1ရက်နေ့ထဲက Fbမှာ စတင်တယ်… 7ရက်နေ့မှာ လမ်းပေါ်စတက်တယ်…အကြီး နဲ့ အကျယ်အော်ခဲ့တယ် အများကြီး လှုခဲ့တယ်သိအောင်တစ်မျိုး မသိအောင်တစ်မျိုးပရိသတ်တွေကဘာမှ မလုပ်ဘူးလားပြောလို့ ကမှူးရှုးထိုးထလုပ်တဲ့ အယောင်ပြ သာကူးယောင်ခြောက်ဆယ်မဟုတ်ဘူးးးရေးချင်တာရေးပီး မဘလော့ခ်ပါနဲ့….မ Dနဲ့….
ကျွန်မမှာတော့ ကိုကေညီ့အကောင့်ကိုယူသုံးနေမှန်းသိတောတောင် မဘလော့ဖြစ်ဘူးးး ဦးလေးကြီး အာဘော်တွေက်ုကြိတ်ခိုက်နေတာ…ဦးလေးကြီးက ကွိုင်ပဲ.😂ခုလည်းဗိုက်ကြီးနေလို့ ဦးလေးကြီးရေ…စိတ်လျော့ဖို့ တားနေဝိုင်းပြောနေကြလို့…လျှော့ထားတာ..ဒလန်အစစ်တွေ ထပ်ရှာလိုက်ပါအုံးးးးအနုပညာလောကထဲမှာ….အများကြီးပါ….😏😏😏ပုံနေတာပဲ😏😏😏” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ တုန့်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
Source ; Nhying Shin’a Facebookacc
ပရိတျသတျတှရေဲ့အခဈြတျော ဇာတျပို့သရုပျဆောငျနှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျဟာဆိုရငျ ရုပျရှငျမြားစှာကို ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ ကရြာဇာတျရုပျကိုပီပွငျပိုငျနိုငျစှာနဲ့သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့အတှကျ ယနအေ့ခြိနျထိ ပရိတျသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတာပဲဖွဈ ပါတယျနျော..။နှိုငျးယှဉျက သရုပျဆောငျပိုငျးမှာ ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျရုံတငျမကပဲ Online Sale ရောငျးတဲ့နရောမှာလညျး အောငျမွငျနသေူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
နှိုငျးယှဉျက ခငျပှနျးကောငျးပီသပီး သူမအပျေါအရမျးကိုခဈြခငျကွငျနာတဲ့ခငျပှနျးသညျ ကိုဘငျးကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့အပွငျ ခဈြစရာသားလေးတဈယောကျကိုလညျးပိုငျဆိုငျထားပွီး ပြျောရှငျစရာမိသားစုဘဝလေးကိုဖွတျသနျးနတောပဲဖွဈပါတယျနျော.။လတျတလောမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး သူမဟာ လူထုလှုပျရှားမှုမှာ တကျကွှစှာပါဝငျလှုပျရှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့လိုနျိုငျငံရေးလှုပျရှားမှာအမွဲပါဝငျနတေဲ့သူမကို ဒလံမလို့ပွောတဲ့အပျေါ အခုလိုပဲတုနျ့ပွနျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
နှိုငျးယှဉျက” ဪ… ၅၀၅ ထဲမပါလို့ ဒလံမ လို့ ပွောခငျြတာလားမသိ Feb 1ရကျနထေဲ့က Fbမှာ စတငျတယျ… 7ရကျနမှေ့ာ လမျးပျေါစတကျတယျ…အကွီး နဲ့ အကယျြအျောခဲ့တယျ အမြားကွီး လှုခဲ့တယျသိအောငျတဈမြိုး မသိအောငျတဈမြိုးပရိသတျတှကေဘာမှ မလုပျဘူးလားပွောလို့ ကမှူးရှုးထိုးထလုပျတဲ့ အယောငျပွ သာကူးယောငျခွောကျဆယျမဟုတျဘူးးးရေးခငျြတာရေးပီး မဘလော့ချပါနဲ့….မ Dနဲ့….
ကြှနျမမှာတော့ ကိုကညေီ့အကောငျ့ကိုယူသုံးနမှေနျးသိတောတောငျ မဘလော့ဖွဈဘူးးး ဦးလေးကွီး အာဘျောတှကျေုကွိတျခိုကျနတော…ဦးလေးကွီးက ကှိုငျပဲ.😂ခုလညျးဗိုကျကွီးနလေို့ ဦးလေးကွီးရေ…စိတျလြော့ဖို့ တားနဝေိုငျးပွောနကွေလို့…လြှော့ထားတာ..ဒလနျအစဈတှေ ထပျရှာလိုကျပါအုံးးးးအနုပညာလောကထဲမှာ….အမြားကွီးပါ….😏😏😏ပုံနတောပဲ😏😏😏” ဆိုပွီး သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနေ တုနျ့ပွနျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ…။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားတဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ဇနီးမောင်နှံ…..
မကြာခင်မှာ ကျရောက်တော့မယ့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် မွေးနေ့ အတွက် အကြို ဆုတောင်းပေး လိုက်တဲ့ အိအိတုန် နဲ့ အေးသီတာ…..